Tartanka Copa America oo daaha laga qaaday iyo xulka Colombia oo ku furtay guul ay ka gaareen USA … + SAWIRRO – Gool FM
Tartanka Copa America oo daaha laga qaaday iyo xulka Colombia oo ku furtay guul ay ka gaareen USA … + SAWIRRO
Haaruun June 4, 2016
(California) 04 Juunyo 2016 – Tartankia xiisaha leh ee Copa America ayaa daaha laga rogay, iyadoo xulka qaranka Colombia uu ku furtay guul 2-0 oo ay ka gaareen Mareykanka.
Labadan xul ee Colombia iyo USA ayaa furay tartanka Copa America kaasi oo u dabaal degayay munaasabadii 100-aad tan iyo markii la’ aas-aasay, waana markii ugu horreeysay oo lagu qabto dalka ka baxsan Latin America.
Xulka qaranka Colombia ayaa goolka hore la yimid daqiiqaddii 8-aad ee bolowgii ciyaarta, kaddib markii kubbad gees laad laga soo qaaday oo uu soo karoosay Juan Cuadrado uu gool u rogay Cristian Zapata.
Inta aan la aadin qeybta nasashada ayaa USA laga dhaliyey goolka labaad, waxaana Colombia lagu abaal-mariyey gool ku laad ama rigoore, kaddib markii xiddig xulka Mareykanka ka tirsan uu kubadda gacanta ku taabtay, isagoo ku jira xerada ganaaxa, waxaana rigooradaas dhaliyey 42-daqiiqo James Rodriguez.
Xulka Colombia ayaa ku adkaaday labadaas gool, iyadoo Mareykanku uu tartanka Copa America guuldarro ku futay.
TOOS u daawo: USA vs Colombia - LIVE (Copa Sudamericana)
Halyeeygii feerka miisaanka culus ee Muhammad Ali oo geeriyooday + Sawirro